January 2021 - Babal Khabar
Jan312021 by बबाल खबरNo Comments
राम्रीसँग विवाह गर्नु हुन सक्छ दुर्भाग्य, रोज्नुहोस् यस्तो युवती !
प्रायः पुरुष सुन्दर युवतीसँग नै विवाह गर्न चाहन्छन् । चिटिक्क मिलेको अनुहार, सल'क्क परेको शरिर गोरो वर्णकी युवतीमाथि धेरैको नजर जान्छ । बाहिर हेर्दा सुन्दर देखिएकी युवतीमा सर्वगुण सम्पन्न हुनु आवश्यक ठा'न्दैनन । तर युवती सुन्दर हुनु पुरुषको लागि दु'र्भाग्य हुने स'त्यता छ । आज हामी त्यो सत्य'ताका बारेमा उल्लेख गर्दैछौ ।' सुन्दरता मात्र देखेर कहिल्यै विवाह जस्तो महत्वपुर्ण निर्णय गर्न हुँदैन । उनले यदि कोही पुरुषले कसैको सुन्दरतालाई देखेर विवाह गर्छ भने उ भन्दा मुर्ख कोही हुँदैन पुरुषहरु केटी राम्रो देखेपछि उनीहरुको स्वभाव, आनीबानी र गुण अवगु'णको बारेमा त झन् सोच्दै'नन त्यसैले पछि पछु'ताउनु पर्छ । युवतीको सुन्दरता मात्र देखेर विवाह गर्नु मुर्खता हो । राम्रा युवतीको मनमा खोट हुनसक्छ, सुन्दर युवती'सँग विवाह गर्नु अगाडी युवतीमा भएको सस्कारमा ध्यान दिनु पर्छ । आचार्य चाणक्यको सुन्दरत
Jan302021 by बबाल खबरNo Comments
आफुले लगाएको ड्रेस च्यातिएपछि प्रियंकाको भयो हालत यस्तो
बलिउड अभिनेत्री देसी गर्ल प्रियंका चोपडा आफ्नो ड्रेसको करण चर्चामा आउँछिन्। खास गरेर उनले रेड कार्पेटमा लगाएको ड्रेसको धेरै चर्चा भएको थियो । प्रियंका त्यस समय बोल्ड ड्रेसमा निकै कन्फिडेंट देखिएकी थिइन् । हालै प्रियंकाले कांस फिल्म फेस्टिवलसँग सम्बन्धित किस्सा शेयर गरेकी थिइन् । प्रियंका चोपडा सामाजिक संजालमा निकै सक्रिय रहन्छिन् । प्रियंका प्राय आफ्नो फ्यानसँग पुरानो याद साझा गर्छिन् । हालै प्रियंकाले आफ्नो उप्स मोमेन्टको शि'कार' हुँदा हुदै पनि त्यसबाट बचेको बताएकी छन् । प्रियंका चोपडाले हालै आफ्नो आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंटमार्फत एक फोटो शेयर गरेकी छन् । यस तस्वीरसँग प्रियंकाले एक किस्सा पनि साझा गरेकी छन् । प्रियंकाले यस तस्विरको क्याप्शनमा लेखेकी छन् , ‘बाहिरबाट म शान्त देखिएकी छु, तर कसैलाई थाहा छैन कि म भित्रदेखि वि'चलित छु । यस ड्रेसको चे'न टु'टेको थियो ।’ ' प्रिय
Jan292021 by बबाल खबरNo Comments
बेहुलाको पैसावाट ८ लाखको किनमेल त्यसपछि बेहुली फ’रार
। आजकल विवाह भन्दा अघि नै बेहुला बेहुलीले संगै सामान किनमेल गर्ने प्रचलन छ । यस्तै प्रचलनका कारण वेहुलाको पैसावाट ६ लाख रुपैयाको किनमेल र अन्य खर्च २ लाख लिएर वेहुली फरार भएकी छन् । हुनेवाली बेहुली आफ्नो ६ लाख खर्च गराएर सम्पर्क विहिन भएपछि बेहुला प्र'हरीको सहयोग लिन पुगेका छन् । यो घटना भारत लखनउको हो । विवाह सम्बन्धी अनलाईन एप मार्फत उनीहरुको भेट गराइएको थियो । मनोज अग्रवाल नाम गरेका युवकले मेट्रोमोनियल वेबसाइट मार्फत बेहुलीसंग सम्पर्क गरेका थिए । आफ्नो विवाहका लागि उनले सादी डट कम भन्ने वेभसाइटमा सबै जानकारी राखेका थिए । १५ अगस्तमा प्रियंका नाम गरेकी युवती उनको सम्पर्कमा आइन् । विहारमा स्थायी घर बताएकी ति बेहुलीले आफ्ना बुवा आमाको नि'धन भइसकेको बताएकी थिइन् । आफ्नो सानीआमासंग दिल्लीमा बसेर पढ्दै गरेको भनेर युवकलाई बताएकी थिइन् । युवकको आमाबुवा र प्रियंकाले सानीमा भनेर चिनाएकी म
कोरोना सं’क्र’मित बढे, घर बाहिर ननिस्किन प्रशासनले गर्यो आग्रह !
चीनमा कोरोना भाइरसका नयाँ 'स'ङ्क्र'मतिहरु प्रत्येक दिन जसो भेटिन थालेपछि यहाँका अधिकारीहरुले बेइजिङ सहरमा बाहिर ननिस्कन भनेका छन् । बेइजिङ सहरका अधिकारीले चीनमा हाल मनाइने ‘स्प्रिङ फेस्टिभल’ को विदा मनाउन एकै पटक ठूलो संख्यामा बाहिर ननिस्किन नागरिक'हरुलाई आ'ग्रह गरेका छन् । हाल चीन सरकारले यहाँ उक्त पर्वका लागि विदा दिएको छ । यस समयमा सरकारी कार्यालयहरु पनि विदा हुने भएकोले ठूलो संख्याका मानिसहरु यो पर्व मनाउन जम्मा हुने गरेका छन् । यो पर्वमा चीनमा विदेश गएका नागरिक पनि घर फर्किने र ठूलो संख्यामा विभिन्न स्थानमा परिवारका साथमा गएर विदा मनाउने गरेका हुन्छन् । तर यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरुले भने चीनमा दिन प्रति दिन कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरु भेटिएको जानकारी गराएका छन् । चीनको राजधानी सहर बेइजिङका नगरपालिका अधिकारीले बेइजिङमा अनावश्यक रुपमा बाहिर ननिस्किन भनेका हुन् । उनले पछिल्ला के
Jan282021 by बबाल खबरNo Comments
केहीबेर अघि सम्म फोनमा कुरा गरेकी बहिनी एकै छिनमा मु’र्दा घ’रमा भएको खबर पाउँदा दिदीको उ’ड्यो हो’स्, विवाह गरेको दुई महिनामै निमाले किन उठाइन् यस्तो कदम (भिडियो हेर्नुस्)
केही बेर अघि सम्म फोनमा कुरा गरेकी बहिनी एकै छिनमा मु'र्दा घरमा भएको खबर पाउँदा बहिनीको अव'स्था के भयो होला ? दुई महिना अघि मात्र प्रे'म विवाह गरेर गएकी बहिनी परिवारको सम्प'र्कमा पनि थिइनन् । दुई महिना देखि आमाबुवा लगायत अन्य परिवारको सम्प'र्कमा रहेकी उनी एक जना दिदीसंग मात्र सामाजिक सञ्जालमा कुरा गर्थिन । वहिनीसंग केही घण्टा अघि सम्म मात्र मोवाइल म्यासेन्जरमा राम्रै कुरा भइरहेको थियो । तर त्यसको केही बेरमै तिम्रो बहिनीले दे'ह त्या 'ग गरिन् भन्दै खबर आएपछि दिदी छाँ'गा'वाट ख'से जस्तो भएकी छन् । वहिनीका श्रीमानको घर परिवारले घ'ट ना स्थ'ल पनि देखाएनन् एकै पटक मु'र्दा घरमा भएको खबर दिए । अहिले सो घट'ना निकै पे'चिलो बनेको छ । दुई महिना अघि मा १६ वर्षको उमेरमै विवाह गरेकी झापाकी स्थानिय निमा लिम्बु'को नि'ध'न पेचिलो बनेको हो । उनले दे'ह त्याु'ग गरेको श्रीमानका परिवारका सदस्यले बताए
Jan272021 by बबाल खबरNo Comments
केबल १५ महिनाकी छोरीलाई ए’क्लै छा’डेर सँ’धैका लागि बि’दा भइन् ३१ बर्षीया दीपा
इटहरीः अ'स्पता'ल र डा'क्टरको लाप'रबा'हीले सुनसरीको धरानमा एक महिलाको श'ल्यक्रि'यापछि मृ’त्यु भएको छ ।इटहरी उपमहा नगरपालिका २ की ३१ वर्षीया दीपा राईको धरानमा रहेको विजयपुर अ'स्प'ता'लको लाप'रबा'हीले मृ’त्यु भएको हो । गत माघ ४ गते पत्थरीको श'ल्यक्रि'याका लागि अ'स्प'ताल भर्ना भएकी उनको उ'प'चारको क्र'ममा सम'स्या देखिएको थियो । अस्प'तालका 'चि'कि'त्सक डा'क्टर ज्ञानेन्द्रप्रसाद दासले उनको श'ल्य'क्रिया गरेका थिए । श'ल्य'क्रि'यापछि उनको र'क्त'श्रा'व भएको र बारम्बार प्रया'स गर्दा पनि नरो'किएपछि दासले धरानमै रहेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रे'फार गरेका थिए । उनले रे'फर मात्रै गरेनन्, ए'म्बु'ले'न्समा परिवारसँगै बसेर स्वयम बीपी प्रतिष्ठान पुगेका थिए । मृतक दीपाकी काकी सवनम राईका अनुसार दासले नै एम्बु''ले'न्समा राखेर सँगसँगै बीपीको आई'सी'यूमा पुगेका थिए । ****** यो समाचार को प
ज्वाइले नै यस्तोसम्म गर्दा रैछन,सरिताको माइती बद’ला लिन्छौ भन्दै मिडियामा (भिडियोसहित)
श्रीमानले विदेशबाट आएर हिसाब खोज्यो भन्दै नारयाणीको तरिमा आफ्ना लुगा र चप्पल फुकालेर नदी फाली म' रि भन्ने पारेकी सरस्वती श्रेष्ठ जब जीवित रहेकी र अर्कैसंग गएकी भन्ने खबर सबै सामू बाहीरियो तब घटनाको विषयमा उनका माईतीले पहिलो पटक सबै वास्तविकता खोलिदिएको छ । माईतीको तर्फबाट सरस्वतीका दाई खेम प्रसाद श्रेष्ठले दुई सन्तानकी आफ्नी बहीनीले यस्तो निर्णय गर्दै कदम उठाउनुमा ज्वाई नै कारण भएको बताएका छन् । सरस्वतीको दाई खेम प्रसादको भनाई अनुसार ज्वाईँ कुल प्रसाद उपाध्यायको बानी अपरिपक्क भएको बुझिएको छ । उनले विबाह त गरे दुई सन्तानको बाबु पनि बने तर उनीमा परिपक्कता भने कहिल्यै नआएको कुल प्रसादका आफ्नै जेठानले बताएका छन् । जेठानको भनाई अनुसार जति कुल प्रसादले कमाए त्यति नै उडाए पनि । उनको यस्तै बानीले गर्दा बहीनी सरस्वती आजिद भएको कुरा खेम प्रसादले बताएका छन् । दाई खेम प्रसादको भनाई अनुस
Jan262021 by बबाल खबरNo Comments
काठमाडौं, धुम्बाराही स्थित भिभोर होटेलमा एक २७ बर्षीय युवकको रहस्यमय मृ’त्यु भएको छ । एक युवातीसंग आज सोमबार बिहान काठमाडौँको धुम्बाराहीस्थित भिभोर होटेलमा गएका थिए ।होटेलको कोठामा पसेको धेरै बेर सम्म पनि सम्पर्कमा नआएपछि होटेलका कर्मचारी कोठामा पुगेर ढोका खोल्न भन्दा युवतीले युवकको मृ’त्यु भएको भनेकी थिइन । त्यसपछि होटेलले तत्काल प्रहरीलाई खबर गरेको थियो । युवकको मृ’त्युको खबर सुने लगत्तै ठुलो संख्यामा उनका आफन्तहरु भिभोर होटेल पुगेका थिए । युवतीले नै युवकको ह’त्या गरेको आफन्तहरुको आ’रोप छ । मृ’तक युवकको श’व पो’ष्ट’मा’र्ट’म’को लागि अस्पताल लगिएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले संगै गएकी युवतीलाई नि’यन्त्रणमा लिई घ’टना बारे थप अ’नुसन्धान थालेको छ ।भिभोर होटेलमा पुग्दा मृ’तक युवकका आफन्तहरुको रु’वाबासी चलेको थियो । भिडियो हेर्न यहाँ जानुहोस ।
प्रचण्ड धेरै सोझो, जालझे’ल नबुझ्ने दावी
नेपाल कम्युनि'ष्ट पार्टी(नेकपा) प्रचण्ड-नेपाल खेमाका अध्यक्ष माधव नेपालले पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सोझो भएको बताएका छन्। सोमबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित दुई नम्बर प्रदेशका अगुवाहरुको भेलालाई सम्बोधन गर्नेक्रममा नेपालले प्रचण्ड सोझो भएको भन्दै जाल'झे'ल न'बुझ्ने' बताए। दाहालले ओलीको जालसा'जी नबुझेकै कारण त्यसको भु'क्त्तभो'गी आफूहरु हुन पुगेको उनको भनाई छ। पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले प्रचण्ड जसलाई पनि सहजै विश्वाश गर्ने बताए। “प्रचण्ड कमरेडले विश्वास गर्नुभएछ, सही गर्नुभएनछ । दुई अध्यक्षको सही हुनुपर्नेमा एउटा अध्यक्षको मात्रै सही भयो भनेर । निर्वाचन आयोगले लेखेर पठाएछ । हुन सक्छ उहाँलाई फकाउन मैले मात्रै सही गरेर पठाइदिए हुन्छ भने होलान् । प्रचण्डले हुन्छ–हुन्छ भन्दिनुभयो होला । हाम्रो प्रचण्ड कमरेड अलि सोझो पनि हुनुहुन्छ । जालझे'ल बुझ्नुह
यी हुन संसारकै सबैभन्दा सुन्दर मोडल, सुन्दरताकै कारण भयो यस्तो
सोशल मिडियामा प्राय: सेलिब्रेटी र बलिउड स्टार ट्रोल हुन्छन्। यस्तै भयो सुन्दर केटि येल शेल्बियासँग। येल टीसी क्यान्डलरको वर्षभरिको सबैभन्दा सुन्दर अनुहारको लिस्टमा पहिलो स्थानमा रहेकी छन्। इंस्टाग्राममा १ मिलियनभन्दा धेरै फलोअर्स रहेको येल आफ्नो ड्रीम लाइफ स्टाइलको कारण चर्चामा रहन्छिन्। अब उनको सुन्दरता उनको लागि सम स्याको कारण बनेको छ। जसकारण सोशल मीडियामा उनलाई कैयौँ समस्याको सामना गर्नुपर्यो। येल शेल्बिया एक इजरायली मोडल तथा अभिनेत्री हुन्। उनले २०२० मा टीसी क्यान्डलरको तर्फबाट दुनियाको सबैभन्दा सुन्दर अनुहार रहेको युवतीको नाम हासिल गरेकी थिइन् । विश्वमा उनको सुन्दरताको निकै चर्चा भएको छ। तर सोशल मीडियामा सुन्दरताको कारण समस्या झेल्नु परेको छ। येल शेल्बियाले इन्टरनेटमा ट्रोलिंगको बारेमा बताईन् कि उनको सुन्दरताको कारण उनलाई ट्रोल गरेका हुन्। येलले एक इन्टरभिउमा बताईन् कि मला